जन्मने बित्तिकै बच्चालाई किन हुन्छ, जन्डिस? ज्योतिषमा छ उपयोगी उपाय – Etajakhabar
जन्मने बित्तिकै बच्चालाई किन हुन्छ, जन्डिस? ज्योतिषमा छ उपयोगी उपाय
ताजा खबर:- प्रायजसो बच्चालाई जन्मने बित्तिकै जन्डिस हुने गर्दछ । नवजात शिशु बिरामी हुनु भनेको उनीहरूको आउँदो जीवनमा केही स्वास्थ्य समस्याहरू उत्पन्न हुनसक्छ । यसकारण थोरै असावधानीले पनि बच्चाको ज्यान पनि जान सक्छ ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार, यो उसको वंशानुगत पाप ग्रहहरूको प्रभावले हुन्छ । सुनेर थोरै अचम्म लाग्न सक्छ तर वंशानुगत पाप ग्रहको अर्थ परिवारमा पूर्वजहरूको केही पाप कर्महरूको फलस्वरूप बच्चाको कुण्डलीमा जन्म देखि नै बिग्रेको ग्रहहरूको दशा हो । प्रायजसो यो राहु दोषहरूको कारण हुन्छ ।
यदि बच्चालाई पटक-पटक जन्डिस भैरहेको छ या जन्डिस घातक रूपमा देखिएको छ भने नवजात शिशुको कुण्डलीको लग्न भावको जाँच गराउनु पर्दछ । लग्नको दोस्रो, तेस्रो र एकादश भावमा शनि र त्यसमा क्रूर ग्रहहरूको दृष्टि भएमा बच्चाले जन्म लिने बित्तिकै जन्डिस हुन्छ ।
ग्रहहरूको शान्ति नगर्दा उसलाई दोस्रो पटक या पटक-पटक यो रोग लाग्न सक्छ । जन्डिस नै बढी भयानक रूपमा नजिक आएमा या बच्चालाइ यसको साथै दोस्रो रोगहरूले पनि समस्यामा पार्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा कुण्डलीको जाँच गराएर सम्बन्धित पापी ग्रहहरूको दोष-मुक्तिको उपाय गर्नुहोस् । यसको साथै पितरलाई शान्तिको उपाय पनि गर्नु पर्दछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २१, २०७४ समय: १९:५६:११